Izinkukhu ezithosiwe zenkukhu
Amabhola enkukhu othosiwe alungele ama-tapas nokudla okulula.
Uhlobo lweresiphi: Tapas
Isifuba senkukhu esingu-500g
Izingcezu eziyi-3 zebhekoni
1 inkomishi yesinkwa kanye nezipuni ezimbili
1 inkomishi kafulawa kakolweni
Njengesinyathelo sokuqala, sizogaya inkukhu kanye nebhekeni, ngosizo lwe-mixer noma i-shredder. Kulesi sinyathelo sizokwengeza ifayela le- upelepele omnyama nosawoti ukunambitha.
Sizobamba isitsha lapho sizofaka khona elinye lamaqanda, isipuni sempuphu kagalikhi kanye nezipuni ezimbili zezinkwa. Konke lokhu kuxubeke kahle nenyama yenkukhu nebhekeni ebesikuchobozile phambilini. Kufanele sibe nesisindo esinyene ngaso sizobe senza amabhola ethu.
Uma usuqedile, ngamunye wethu uzodlula epuletini ezoqukethe i- ufulawa, kamuva ngomunye ozoqukatha i- amaqanda amabili ashayiwe futhi ekugcineni kwepuleti lesithathu lapho sizoba khona ne- imvuthu yesinkwa.
Lapho amabhola ethu ehlelwe kahle, Sizowathosa epanini cishe imizuzu emihlanu ngamafutha omnqumo lapho kushisa kakhulu. Uma sesithosiwe, sizowabeka epuletini ngamaphinifa ambalwa wamaphepha amunca ukukhipha uwoyela omningi.
Ukuhambisana namabhola enkukhu sikhethe iqanda elithosiwe kepha ungenza usoso omnene noma amanye ama-patatas bravas. Zimnandi!
Iresiphi ngu Ukupheka Kwekhishi ku-https: //www.lasrecetascocina.com/bolitas-pollo-fritas/